Master’s Sun ( 2013 ) ( Completed )
Almost Human(2013)Season1[Complete] Almost Human(2013)ဇာတ္လမ္းတြဲအၫႊန္း****************************************IMDb.....8.0အပိုင္း( ၁ မွ ၁၃ ) [ စ/ဆုံး]ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ၂၀၄၈ ခုနှစ်မှာ လူသားတွေ စက်ရုပ်တွေ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ ဆုတ်ယုတ်လာတဲ့ ယဥ်ကျေးမှုစနစ်တွေကြား မှ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းတွေကိုရိုက်ပြထားတာပါ..... နည်းပညာတွေတိုးတက်လာသလို ဒုစရိုက်သမားတွေကလည်း နှိမ်နှင်းရခက်လောက်အောင် လမ်းမပေါ်မှာ ပျံကျဲလို့.... ဒီလိုဒုစရိုက်မှုတွေကို နှိမ်နှင်းဖို့ အစိုးရဟာ စုံထောက်တွေနဲ့ စက်ရုပ်တွေနဲ့ တွဲဖက်ပြီး အမှုလိုက်စေပါတယ်.... ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဇာတ်လိုက်မင်းသားကြီးကတော့ The Boys စီးရီးထဲမှာပါတဲ့ Karl Urban ကြီးကိုစုံထောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့တွေ့ရမှာပါ... ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာလည်း စည်းမျဥ်းတွေမလိုက်နာ သူလုပ်ချင်ရာလုပ်နေပေမယ့် တိုက်ခိုက်ရေးကောင်းမွန်ပြီး တော်လွန်းလို့ ရဲဌာနကနေလက်မလွှတ်နိုင်တဲ့ စုံထောက်ကြီးပါ....အီနေတာမျိုးမရှိသလို အပိုင်း(၁)ကနေကိုစပြီး ဗျင်းကြပါတယ်.... ဇာတ်ရှိန်ကလည်း ခပ်သွက်သွက်ဖြစ်ပြီး လုံး၀ကိုမပျင်းမရိ ရပါဘူး.. စိတ်၀◌င်စားစရာလည်းကောင်းသလို အက်ရှင်ခန်းတွေလည်း အမိုက်စားပါပဲ...လေဒီအလန်းတွေလည်းပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးပါရစေ....... သိပ္ပံအက်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းမို့ ကိုးရီးယားစီးရီးအများစုပဲ တင်ဆက်ပေးဖြစ်နေလို့ အကောင်းဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်... အပိုင်း (၁၃)ပိုင်းအပြီးထိထွက်ထားပါတယ်...၂ရက်တစ်ခါ (၂)ပိုင်းစီတင်ဆက်ပေးဖို့ စီစဥ်ထားပါတယ်...တစ်ပိုင်းလောက်တော့မြည်းစမ်းကြည့်စေချင်တယ်... ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ SCRN နှင့် Cynthia တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်...(unicode)ဒီဇာတ္လမ္းတြဲဟာ ...
TMDb: 8.0/10 7800 votes
Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. ( Season3& 4, ) ( Completed ) Agents of S.H.E.L.D (Season 6) =================== ပြီးခဲ့တဲ့ Season5မှာ Monolith လို့ခေါ်တဲ့မှော်ဆန်ဆန်ကျောက်တုံးတွေကြောင့် Phil Coulson တို့အုပ်စုကမ္ဘာပျက်ပြီး အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့လူတွေကို Kree ဂြိုလ်သားတွေကနေကျွန်ပြုထားတဲ့ခေတ်ကို ရောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် Coulson တို့ မူလအချိန်ကို ပြန်ရောက်လာနိုင်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာမပျက်အောင် တားဆီးခဲ့တာကို အမှတ်ရကြအုန်းမှာပါ။ဒီ Season (6) မှာတော့ Season (5) ဖြစ်ရပ်အပြီး တစ်နှစ်အကြာမှာ ဇာတ်လမ်းစထားတာဖြစ်ပြီးCoulson မရှိတော့နောက်ပိုင်း S.H.E.L.D Director အသစ်အဖြစ်Mark ကဦးဆောင်နေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Fitzအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောချင်ပါတယ်။ Fitz က Season (5) မှာတိုက်ပြိုကျတဲ့အတွက် သေသွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လဲ Daisy နဲ့ Jemma တို့က ဒီ Season (6) မှာအာကာသထဲထပ်သွားပြီး ဖန်လုံခန်းထဲမှာ ရေခဲရိုက်ခံထားရတဲ့ Fitz ကိုပြန်ရှာနေတာပါ။ Mark ကရော Coulson လို ...
TMDb: 6.8/10 1257 votes
Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. ( Season3& 4, ) ( Completed )
Vikings Season5(2018) Part2[COMPLETE] ရွှေပွဲလာ ပရိတ်သတ်များ အချိန်အတန်ကြာ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရတဲ့ Vikings စီးရီး ပြန်လာပါပြီ....အရင်အပိုင်းတွေမှာ ရက်ဂ်နာ လော့ဘရွတ်ရဲ့သားတွေ အချင်းချင်း စီးချင်းထိုး စစ်ခင်းရာကနေ တစ်ခန်းရပ်သွားခဲ့ချိန်မှာတော့....အခုလာမယ့် အပိုင်းတွေမှာ စစ်ရှုံးသွားတဲ့ လာဂါသာတို့ ဘယ်လိုစီရင်ခံရမလဲ....ဒါမှမဟုတ် ရှောင်တိမ်းလွတ်မြောက်သွားသလား ဆိုတာကို စတင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်...အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ အင်္ဂလန်ကဘုရင်အသစ်နဲ့ အရိုးမဲ့အိုင်ဗာ...ဖလိုကီ စသူတို့ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဇာတ်ကွက်တွေကို ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာ ဆက်လက်ရှုစားရမှာပါ...(ဘာသာပြန်တင်ဆက်ထားသူကတော့ ကိုဇွဲခန့်သွင် ဖြစ်ပါတယ်။) Quality – 720p WEBDuration – 44min (@Episode)Subtitle – Myanmar HardsubFormat – Mp4Genre : Action, Adventure, DramaSource : 720p.WEB.h264-TBSTranslator – Zuel Khant ThwinEncoder – Thanhtike Zaw Zip File - VIP / Megaup / Yoteshin Season5ျပီးပါျပီ
TMDb: 7.5/10 1393 votes
Vikings Season5(2018) Part2[COMPLETE]
My Love From Another Star (Completed) CM က Korea ပရိတ်သတ်တွေအတွက် My Love From Another Star ဆိုတဲ့Drama ကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ..2013 က ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ပြသခဲ့တုန်းက ကိုရီးယားမှာရော ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရော..အတော်လေးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်မင်းသားချော Kim Soo-Hyun က ဒိုမင်းဂျွန်ဇာတ်ကောင်ကနေသရုပ်ဆောင်ပြီးမင်းသမီးချော Jun Ji-hyun က ချောင်းဆုန်းရီ နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့ လိုက်ဖက်ညီစွာသရုပ်ဆောင်မှု ဇာတ်လမ်းရဲ့ပေါ့ပါးကောင်းမွန်မှု..ဟာသလေးတွေလည်းရောနှောထည့်ထားမှု...ရိုမန့်တစ် ဆန်တဲ့ဇာတ်လမ်းအဖွဲ့လေးတွေကြောင့်လည်း အောင်မြင်တာမဆန်းပါဘူးဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့..ဒိုမင်းဂျွန်က ကြယ်တွေကနေလာခဲ့တဲ့ ဂြိုလ်သားတစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ ဂျိုဆွန်းခေတ်မှာ ကမ္ဘာမြေပေါ်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်..ဒါပေမယ့်လည်းမတော်တဆ တခုကြောင့်မိမိနေထိုင်ရာ ကြယ်ကို မပြန်နိုင်တော့ပဲ..ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ကျော်သောင်တင်နေခဲ့ရတယ်ခေတ်အဆက်ဆက်ဖြတ်သန်းမှုတွေကြားထဲမှာ..လူသားတွေနဲ့မတူတဲ့ စွမ်းအင်တွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒိုမင်းဂျွန်တစ်ယောက် ကမ္ဘာမြေမှာ လူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်..ကောက်ကျစ်မှု..စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုလေ့လာနေခဲ့ပြီး..သိုသိပ်စွာ နှစ် ၄၀၀ လုံးနေထိုင်ပါတယ်..နောက်ဆုံး ပြန်ခွင့်ရတော့မယ့် အချိန် ၃ လလေးအတွင်းမှာနိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ချောင်းဆုန်းရီ နဲ့တွေ့ဆုံပြီး..အလွဲလေးတွေကအစပြု..နောက်ပိုင်းဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဆက်လက်ခံစားကြည့်ပါဦးTranslated By - May Htet , Thae Ei , LK , ...
Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. Season 1 &2[COMPLETE] "Agents of S.H.E.L.D"AOS Fan ေတြအတြက္ကေတာ့ အထူးတလည္ရွင္းျပစရာမလိုေပမယ့္ မရင္းႏွီးေသးတဲ့လူေတြအတြက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလး ရွင္းျပေပးခ်င္ပါတယ္။"Agents of S.H.E.L.D" စီးရီးက MCU နဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ စီးရီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး Avenger Assemble (Avenger 1) မွာ ေသဆုံးခဲ့တဲ့ S.H.E.L.D agent Phil Coulson ကို အဓိက ဦးတည္ဇာတ္လမ္းတည္ထားပါတယ္။စီးရီးတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာလဲ MUC ကအျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႕အခ်ိတ္အဆက္မိမိရိုက္ကူးထားၿပီး MCU Fan ေတြအတြက္ကေတာ့ မၾကည့္မျဖစ္စီးရီးတစ္ခုပါပဲ။ဦးတိုနီတို႔ ဘႀကီးCaptတို႔ ခိုခုိေသာ္ရ္ တို႔အျပင္မွာအစြမ္းကုန္ ကမာၻကိုကာကြယ္ေပးေနသလို AOSအဖဲြ႕ကလဲ ေနာက္ကြယ္မွာလူမသိသူမသိ လ်ိဳ႕လ်ိဳ႕၀ွက္၀ွက္ေလး ကာကြယ္ေပးေနခဲ့တာပါံHydra အေၾကာင္းကိုလဲဒီစီးရီးထဲမွာ ျပည့္ျပည့္စုံစုံသိႏိုင္ပါတယ္။Nick Fury ရဲ႕ေသဆုံးမႈ(ေသခ်င္ေယာင္ေဆာင္)က SHIELD အေပၚဘယ္ေလာက္သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့လဲဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊Avenger: Age of Ultron ေနာက္ဆုံးခန္းမွာ လာကယ္တဲ့ ဟယ္လီကယ္ရီယာ(helicarrier)ကို S.H.E.L.D မွာတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း၊ အခု Season5မွာလဲ Thanos ...
TMDb: 6.7/10 1089 votes
Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. Season 1 &2[COMPLETE]
The Heir 2013 (Completed) ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ ဒိတ္ဒိတ္ၾကဲ အားေပးမႈ႕အၿပည့္၀ရရွိထားတဲ့ မင္းသားလီမင္ဟို နဲ႕ မင္းသမီးပတ္ရွင္ေဟးတို႕ရဲ႕ အေကာင္းဆံုးေတြထဲက အေကာင္းဆံုးစီးရီးတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္... ဒီစီးရီးေလးဟာ Rating 7.6/10 အထိရထားတဲ႔ ဇာတ္ကားေလးျဖစ္ပါတယ္ American Digital Distribution Platform 'Dramafever' နဲ႔ Korean Production တို့က ပထမဆံုး Co Produced ျပဳလုပ္ထားတဲ႔ Drama အမ်ိဳးအစားဇာတ္လမ္းေလးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားမွာလည္္း ေတာ္ေတာ္ေလး Hit ျဖစ္ခဲ႔ျပီး Asia မွာလည္း အရမ္းလူျကိုက္မ်ားခဲ႔ပါတယ္..... ဒီစီးရီးေလးဟာဆိုရင္ နာမည္ျကီးစာေရးဆရာမ ( Decendents of the Sun , Goblin) တို႕ကို ေရးတဲ႔ စာေရးဆရာမ Kim Eun Seok ရဲ႔ နာမည္ျကီးဇာတ္လမ္းတြဲေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ Hallyu ေလာကမွာ နာမည္ျကီး ပရိသတ္အခိုင္အမာရထားတဲ႔ Lee min ho နဲ႔ Park Shin Hye ကိုတြဲေပးထားျပီး အရံ ဇာတ္ပို့ေတြကအစ နာမည္ရထားတဲ႔သူေတြပဲ သံုးထားလို့ မထြက္ခင္ကတည္းက ပရိသတ္စိတ္ဝင္စားခဲ႔တဲ႔စီးရီးေလးလည္းၿဖစ္ပါတယ္... ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေလးကိုေၿပာရမယ္ဆိုရင္ ခ်မ္းသာၿပီးအထီးက်န္ဆန္ေနရတဲ့သူေဌးသားေလး ကင္တန္နဲ႕ သူဆင္းရဲမေလး ခ်ားအြန္ဆန္းတို႕ ...
The Heir 2013 (Completed)
The Originals Season2လစဥ္တိုင္း ပံုမွန္ Season Complete ျဖစ္ေအာင္ တင္ဆက္ေပးေနတဲ့ The Originals Season2ကို တင္ဆက္ေပးရမယ့္ အခ်ိန္ က်ေရာက္လာပါၿပီ ဒီအပိုင္းေတြမွာေတာ့ ဗန္ပိုင္းယား ေတြရဲ႕ ရင္ေသြးငယ္ေလးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရင္း ေဘးရန္ေတြကို ဒီ ေမာင္ႏွမ သံုးေယာက္ ဘယ္လို ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းရအံုးမလဲဆိုတာ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈလုိက္ၾကပါအံုး ခင္ဗ်ာ... Thit San Khant EP 01 Mega/Openload/Solid EP 02 Mega/Openload/Solid EP 03 Mega/Openload/Solid EP 04 Mega/Openload/Solid EP 05 Mega/Openload/Solid EP 06 Mega/Openload/Solid EP 07 Mega/Openload/Solid EP 08 Mega/Openload/Solid EP 09 Mega/Openload/Solid EP 10 Mega/Openload/Solid EP 11 Mega/Openload/Solid EP 12 Mega/Openload/Solid EP 13 Mega/Openload/Solid EP 14 Mega/Openload/Solid EP 15 Mega/Openload/Solid EP 16 Mega/Openload/Solid EP 17 Mega/Openload/Solid EP 18 Mega/Openload/Solid EP 19 Mega/Openload/Solid EP 20 Mega/Openload/Solid EP 21 Mega/Openload/Solid EP 22 Mega/Openload/Solid
Vikings Season5Translated by Zuel Khant Thwin Encoded by Thanhtike Zaw Quality : WEB-DL 720p File Size : 300 MB (Each Episode) ========================== Season5Complete Zip File VIP / Yoteshin[1-10] / Yoteshin[11-20]
TMDb: 7.4/10 1120 votes